DAAWO SAWIRRO: Madaxda Puntland iyo Isimmo ka qeyb-galay aas ballaaran oo loogu sameeyay Gaalkacyo allaha u naxariste Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan | RBC Radio
DAAWO SAWIRRO: Madaxda Puntland iyo Isimmo ka qeyb-galay aas ballaaran oo loogu sameeyay Gaalkacyo allaha u naxariste Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan
Posted on July 15, 2017 RBC, Wararka
Gaalkacyo (RBC Radio) Dulleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa maanta aas ballaaran loogu sameeyay allaha u naxaristo,Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan oo horaantii bishan ku geeryoodey dalka Sweden.
Waxaa ka qeybgalay aaska fiqiga,madaxweynaha Puntland,madaxweyne ku- xigeenka , guddomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiiladda Puntland, mas’uuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, qaar kamida Isimadda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshadda ku dhaqan magaalada Gaalkacayo.
Madaxweynaha Puntland oo ku hadlaya afka goloyaasha Dawladda Puntland iyo kan shacabka Puntland ayaa uga tacsiyey ummaada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Puntland, eheladii, qaraabadii asxaabtii iyo caruurtii uu ka geeriyoodey marxuunku, waxaana Madaxweynuhu uu sidoo kale uga tacsiyey geerida marxuunka dhammaan isimada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Madaxweynaha ayaa si gaara ugu tacsiyeeyey eheladii, qoysaskii, carruurtii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunku, waxaana uu Illahay uga baryey inuu samir iyo iimaan kasiiyo dhammaantood geeridaa naxdin tale ee ku timi Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan Codweyne.
Dhinaca kale,Madaxweynaha Puntland ayaa shacabka iyo masuuliyiinta dawladda ee kasoo qayb galay aaskani qaran ee loo sameeyey marxuun Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan kula dardaarmay in lays cafiyo oo laysa saamaxo laguna cimra qaato geeridani walaalkeen maanta ku timi, lana ogaado in ruux walba oo nafi ku jirto keligii lagu xisaabidoono qabri labo mittir ah.
Madaxweynaha Puntland,wuxuu u mahad naqay dhammaan dadka ehlu-sharafka ah ee kasoo qayb galay aaskan qaran ee loo sameeyey marxuunka, waxaana uu sidoo kale bogaadiyey guddiga qaban qaabadda aaskani qaran.
Isimmo iyo waxgarad kale oo ka qeyb-galay aaska waxaa ay sheegeen geerida allaha u naxariste Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan inay wada-gaartay,marka waxaa ay tacsi u direen ehalada iyo dhammaan bulsha Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed,waxaa kalo ay isimmaddu sheegen in fiqiga door weyn ku lahaa dadaallada nabadeynta ee gobolka iyo dalka ka socday.
Gabagabadii,madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa isna dhankiisa ummaada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland eheladii, asxaabtii qoysaskii iyo caruurtii uu ka baxay marxuunku uga tacsiyeeyey, waxaana Madaxweyne ku-xigeenku uu sidoo kale illaahay uga baryey marxuunka inuu u naxariisto, qabrigana u waasiciyo, su’aasha qabrigana Alle u fududeeyo, isla markaana uu illaahay ”SWC” ku abaal mariyo Janadiisa kuwa ugu derejadda sareeya.
One Response to DAAWO SAWIRRO: Madaxda Puntland iyo Isimmo ka qeyb-galay aas ballaaran oo loogu sameeyay Gaalkacyo allaha u naxariste Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan
Rabbi naxariistiisa ha ka waraabiyo qabrigana allaha u nuuriyo samair iyo imaan allaha kasiiyo dhammaan ummadda Muslimkaa gar ahaan helkii uu ka geeriyooday